Ndeipi njodzi dzekutengesa mapuratifomu? | Ehupfumi Zvemari
Imwe yezvinhu zvitsva izvo kudyidzana kwepasi rose mukudyara hakuna kuunza iko kutaridzika kwemahombekombe emari edhijitari emari ayo ivo havana kutariswa mune chimwe chigadzirwa. Kana zvisiri, pane kudaro, ivo vanofukidza akasiyana mashandiro mumari yekutengesa uye yekutengesa. Kubva pane ramangwana sarudzo kuita contract misiyano. Pasina kukanganwa zvimwe zvechinyakare zvemari midziyo yenzvimbo yekudyara, senge mbishi zvigadzirwa.
Aya mapuratifomu emari edhijitari anotibvumidza kuwana zvirimo mumaminetsi mashoma uye nekudaro kuita chero mashandiro mumisika yemari. Izvo hazvidi kuti uve neakaundi yekutarisa kana kunyatso chengetedza hukama hwakasimba neanoshanda. Saka zvinongodiwa chete kunyoresa ine nhevedzano yedhata yakakosha uye izvo hazvizotyora hunhu hwedu. Chero zvazvingaitika, aya mapuratifomu epamhepo anouya kubva kunharaunda yenyika, kunyangwe kubva kuSoutheast Asia nyika.
Pakutanga, ichatipa mukana wekushanda mune chero hupfumi hwemari, kunyangwe mamwe acho atisina nhau kusvika parizvino. Nezvakanakira kuti isu tinogona kukudziridza kudyara kubva pamari shoma kwazvo, yakatenderedza 20 euros. Iine hupamhi hwepamusoro uye iyo isingagone kuwanikwa mune zvimwe zvakajairika zvigadzirwa zvemari. Ehezve, iwo muyedzo mukuru wechikamu chakanaka cheavo vadiki nepakati varimi. Asi chenjera kwazvo nemapuratifomu, nekuti anogona kuisa njodzi kuzvido zvavo.
1 Mapuratifomu ekutengesa: mutemo wavo
2 Haasi echinyakare mashandiro
3 Kuvapo pasocial media
4 Investment mune zvemari midziyo
5 Deposit uye kubvisa mari
6 Nguva yemberi yekutengesa
Mapuratifomu ekutengesa: mutemo wavo
Chinhu chekutanga icho chatinofanira kutarisa muhukama hwedu nedhijitari emari mapuratifomu anotendera inodzorwa nemazvo. Hazvishamise kuti, parizvino pane huwandu hwakawanda hwevaya vasina kupfuura nenzira inodikanwa kwazvo yekusimbisa mashandiro anoitwa mumusika chero wezvemari, chero chingave chiri. Kubva pane ino maonero, pasina mamiriro ezvinhu iwe yaunofanirwa kutora chikamu mune iyi mhando yemadhijitari emari mapuratifomu anotendera. Pakati pezvimwe zvikonzero nekuti isu tinogona kungorasikirwa nemari yakaiswa kana kutotadza kuwana mari inowanikwa.
Kune rimwe divi, isu hatigone kukanganwa izvozvo kana zvasvika kune njodzi dzine njodzi Ivo vanoreva kuti mune dzakawanda zviitiko kune yakanyanya kukwirisa uye kuti ivo havapo mune zvimwe zvakajairika kana zvechinyakare zvigadzirwa zvemari. Ndokunge, kuburikidza neiyi nzira yekudyara iwe unogona kuwana yakawanda mari mukuita kwakaitwa. Asi zvinopesana, njodzi yacho yakanyanya kukwirira uye kusvika padanho rekuti iwe unogona kusiya chero mari yakaiswa. Icho chinhu icho iwe chaunofanira kunyanya kukoshesa kana ukasarudza iyi modhi ine chekuita neyemisika yemari.
Haasi echinyakare mashandiro
Mune mapuratifomu ekushambadzira edhijitari, izvo zvausingazowane izvo zvigadzirwa zvawanga uchibvumirana nebhangi rako raunogara. Mupfungwa iyi, kutenga nekutengesa zvikamu pamusika wekutengesa vakakundwa nemaitiro ane hukasha zvakanyanya uye kuti pamwe hauna kushanda navo muhupenyu hwako hwese. Iyi ndiyo imwe njodzi inosanganisirwa mukuita mashandiro aya mumisika yemari. Hazvishamise kuti iwe uri kutarisana nechero chikamu, icho chinopfuura mari yekudyara chine chekuita nekuoma uye kwakachena kufungidzira.
Kune rimwe divi, hatigone kukanganwa kuti izvi zvigadzirwa zvemari zvinoda kudzidza kukuru kwevashandisi. Hazvina kukwana nechishuwo cheku wana muhombe muhomweIzvo zvinodawo kupa ruzivo rwakadzama rweaya akakosha uye ane njodzi misika yemari. Iwe haufanire kujekesa mune ako mashandiro nekuti chokwadi, chinonyanya kuitika ndechekuti kuyedza kunoenda zvisirizvo zvakashata uye mhedzisiro yayo pachiyero cheakaundi account yako inogona kunge ichishungurudza chaizvo. Ichi ndicho chimwe chinhu chekufunga nezvacho mune chinangwa uye ongororo yakavimbika yedhijitari yekutengesa mapuratifomu.
Kuvapo pasocial media
Kana aya madhijitari ekutengesa mapuratifomu achizivikanwa nechimwe chinhu, imhaka yeavo kushingaira kuvepo pasocial media. Chokwadi, iwo anosanganisirwa munhoroondo dzeakanyanya kukoshesa nemhedzisiro miviri. Kune rimwe divi, taurirana nevatengi vako mhando dzese dzenhau maererano nedhijitari chikuva, uye kune rimwe divi, gadzirisa chero mibvunzo yavanogona kuburitsa panguva ipi neipi. Kubva pamaonero aya, chishandiso chine hunyanzvi chinogona kukupa iwe inopfuura pfungwa imwechete yekudyara akanakisa emari aripo mune imwe nhambo nemamiriro. Icho chinhu chakanyanya kunaka mukirasi ino yevanoshanda zvemari. Beyond kumwe kufunga kwehunyanzvi.
Chimwe chinhu chinofanirwa kukosheswa mune aya madhijitari ekutengesa mapuratifomu ndechekuti iwo ane masimba ekushandisa kuitira kuti iwe ugone kutakura iyo kuongorora mashandiro kubva kune chero chigadzirwa chehunyanzvi. Mupfungwa iyi, irutsigiro rwakakura kumabasa ako mumisika yequity uye nekupfuura njodzi dzinosanganisira kufamba kwavo kwese. Hazvishamisi kuti zvakabatana zvakanyanya nehunyanzvi hutsva pamusika. Chinhu chisingaitike, semuenzaniso, neyakajeka mashandiro pamusika wemasheya.
Investment mune zvemari midziyo
Iyo yemari midziyo iyo yako mashandiro anogona kunge ari pasi haaverengeke uye eakasiyana masikirwo uye zvinoenderana nehunhu hwemadhijitari ekutengesa mapuratifomu. Mumwedzi ichangopfuura, iyo kudyara mumadhijitari emari, kunyanya mu bitcoin, asi zvakare mune zvimwe zvisingazivikanwe chizvarwa chekupedzisira. Ngozi yekufamba uku yakanyanya uye munzvimbo yekutanga uchafanirwa kuongorora kana anoshanda mukutsinhana ari vaviri vaviri anotongwa nemuviri unokwanisa. Hatigone kukanganwa kuti zvinosuruvarisa mune izvi kwakave nekumwe kubiridzira mugore rapfuura.
Nepo pane zvinopesana, mumwedzi ichangopfuura zvimwe zvakajairika zviwanikwa zvemari zvakabuda zvakare. Ndiyo chaiyo nyaya ye Zvigadzirwa uye iwo aunowana mamwe matambudziko kuwana kuburikidza nedzimwe nzira dzekutengesa. Pakati pazvo pane simbi dzinokosha (goridhe, sirivheri, platinamu, nezvimwewo) kuitira kuti iwe ugone kuita purofiti inobatsira kuburikidza nenzvimbo yakachengeteka yakakosha par kugona. Takatarisana nekusagadzikana uye kusagadzikana kwemisika yemari. Kunge vamwe vakaita semidziyo, oiri yakamira kupfuura zvese. Mupfungwa iyi, hapana mubvunzo kuti mikana yebhizinesi yakavhurika kwauri pamusoro pezvimwe zvidiki kufunga.
Deposit uye kubvisa mari
Aya madhijitari ekutengesa mapuratifomu anoshanda pasi penzvimbo dzakasiyana zvachose achienzaniswa nemamwe mapoka ekudyara kana masangano emari. Iko kunenge kuchinyatsodiwa ita dhipoziti yemari kutanga kushanda mumisika yemari iyi. Kusvika padanho rekuti mamwe madhijitari ekutengesa mapuratifomu anoda dhiimendi shoma Pasi pemari iri pakati peanenge gumi ne10 euros, kunyangwe paine zvimwe zvinoda mari zvakagadzirirwa vatengesi vehunyanzvi. Kunge makomisheni uye zvimwe zvinoshandiswa mukutungamira kana kugadzirisa.
Pasi pechirongwa chakafanana, kubvisa mari kunoitwa kubva kudhijitari yekutengesa mapuratifomu. Kune izvo, zvaunogona shandisa nzira dzakasiyana dzekubhadhara: kuendesa kubhangi, kiredhiti kana makadhi ekubhengi uye chekupedzisira zvigadzirwa zvemagetsi zvinonyatsoratidzwa mukirasi ino yekushanda kwemari. Kusiyana nekutenga uye kutengeswa kwemasheya pamusika wemasheya kana zvimwe zvigadzirwa zvemari: mari yekudyara, mvumo kana vamwe vane maitiro akafanana. Chero zvazvingaitika, kushanduka kwekuita mafambiro emari aya kuchazara.
Nguva yemberi yekutengesa
Zvimwe zvigadzirwa zviripo mukirasi iyi yemadhijitari ekutengesa mapuratifomu ndeaya anotorwa kubva mune ramangwana mashandiro. Kwete chete mumisika yemari, asiwo mune dzimwe nzira senge simbi dzakakosha, mari chaiyo kana zvigadzirwa. Kubva pane ino basa maonero, hapana mubvunzo kuti madhijitari ekutengesa mapuratifomu anoumba a chishandiso chitsva chekudyara asi pasi pehunhu hwayo. Iko zvisina kukwana kudyara, asi kuve wakagadzirira kuita zviitiko zvakaoma izvi mumisika yemari inokosha.
Iko hakuna kupokana kuti aya anoshanda ekudyara pakati pevanhu akaomarara zvakanyanya. Hapana munhu anopokana izvi panguva ino chaiyo uye zvine hungwaru kuve chenjera kuvhura nzvimbo pane mamwe emari emari anowanikwa pamadhijitari ekutengesa. Iko chinangwa chekutanga ndechekuchengetedza chikamu chemipiro yako yezvemari nekuda kwenjodzi huru yekuti mhando yemabasa iyi inosanganisira mumusika, sezvatakatsanangurira kare.
Chimwe chezvinangwa zvako nekukasira zvichave kuongorora kana zvichinyatso kukosha kuvhura zvinzvimbo muzvigadzirwa zvemari zvakaoma seizvi. Nekuti iwe unogona kunge usine chikonzero chekuisa pangozi capital yako mumabasa ane hunyanzvi. Iko mune mukana wese iwe uine zvakawanda zvekurasikirwa pane kukunda mune zvese zvinogoneka zviitiko. Hazvishamise kuti iwe unenge uine mashoma ekuzvidzivirira mashandiro pane mune zvimwe zvakajairika zvigadzirwa zvemari. Kuti pakupera kwezuva chinhu chaunofanira kutarisa kubva zvino zvichienda mberi.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ehupfumi Zvemari » Zvigadzirwa zvemari » Ndeipi njodzi dzekutengesa mapuratifomu?
Cellnex inogona kurangwa mumusika wemasheya weERE yayo